Kunoma yiliphi ibhizinisi le-e-commerce, ukubeka umkhankaso we-digital marketing ophumelelayo ungaba isu elihle. Amabhizinisi amaningi enza ukuthengiswa okuningi kwi-intanethi usebenzisa izindlela ezifana ne-SEO. Esikhathini esiningi se-SEO sondela, amagama angukhiye ucwaningo kuyindlela ejwayelekile yokuthola amagama angasesha kakhulu okusetshenziselwa kokuqukethwe kwewebhusayithi. Le nqubo yenza isigaba sesayithi sibe phezulu kuma-SERP wale misho ethile. Noma kunjalo, ukusetshenziswa ngokweqile kwegama elingukhiye ekukhohliseni izinjini kungabangela izinhlawulo ezinjenge-deindexation. Abantu kufanele bagweme ukusebenzisa igama elingukhiye ukugxilisa njengendlela yokumaketha yedijithali.